शरीर फुर्तिलो बनाउन यस्ता खाने कुरा खाने गर्नुहोस् | Music Joy Media Music Joy Mediaशरीर फुर्तिलो बनाउन यस्ता खाने कुरा खाने गर्नुहोस् | Music Joy Media
7:13 AM | Tuesday, August 20, 2019
शरीर फुर्तिलो बनाउन यस्ता खाने कुरा खाने गर्नुहोस्
Published On : 11 February, 2019 6:20 am
दिनभरी लागि शरीर फुर्तिलो रहनु निकै नै आवश्यक हुन्छ । तर, प्रायः मानिसहरु एकछिन काम गरेपछि थाक्ने गर्छन् ।
उनीहरुलाई काम गर्न अल्छि लाग्ने गर्छ । शरीरमा अल्छिपना आउनु हाम्रो खानेकुरामा भर पर्छ । मानिसले आफू फुर्ति रहनको लागि शारीरिक व्यायामको साथै आफूले खाने खानामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
यसका लागि एकैचोटी धेरै खाना खान पनि हुँदैन । शरीरलाई फुर्ति राख्नको लागि थोरैथोरै गरेर दिनमा धेरै पटक खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ ।
मानिसले दिनभरि शरीर फुर्तिलो पार्नका लागि मौसमी फलफुल र सागसब्जी खानुपर्छ । यसले हाम्रो शरीरलाई उर्जा दिने काम गर्छ । तर, हामीले औषधि हालेर उब्जाएको फलफूल र सागसब्जी खान हुँदैन ।
मौसमी फलफुल र सागसब्जीले शरीरको थकानलाई मेटाउन मद्दत गर्छ । यसले गर्दा हामी दिनभरि फुर्तिलो रहन सक्छौं । यस्तै बाहिरी खानामा पोषण तत्व कम हुने गर्छन् । यसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा उर्जा प्राप्त हुँदैन ।
त्यसैले खाजाको रुपमा बाहिरी खाना खाने गरेमा शरीर छिट्टै थाक्ने गर्छ । अप्रशोधित खानेकुरा जस्तै चिउरा, ओट्स खाँदा हाम्रो शरीरले छिटै ऊर्जा पाउँछ । जसले गर्दा हामीलाई काम गर्दा थकान महसुस हुँदैन ।
१. थोरै फ्याटयुक्त प्रोटिनः टोटल, स्याचुरेटेड फ्याट र कोलेस्टेरोलको मात्रा थोरै हुने मासु वा प्रोटिनले पर्याप्त ऊर्जा दिन्छ । कुखुराको मासु, टर्की र माछा यस्तो प्रोटिनमा पर्छन् । माछामा पाइने ओमेगा–३ फ्याटी एसिडले मुटुसम्बन्धी रोग लाग्नबाट जोगाउँछ । यी खानेकुराले हामीलाई छिटै थाक्न दिँदैन ।
२.पानीः स्वस्थ र फुर्तिलो रहन तथा नथाक्न हाम्रो शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पानी हुनुपर्छ । पानीले हामीलाई कुनै ऊर्जा नदिने भए पनि यसले शरीरका सबै अंगमा ऊर्जा प्रवाह गर्न मद्दत गर्छ ।
त्यसैले दिनभरि छिनछिनमा पानी पिइरहनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा पनि थकाइ लाग्छ । सोडा, कफी, चिया वा कोल्ड एनर्जी ड्रिंक्सको साटो पानी खानु सर्वोत्तम हुन्छ ।
३.केराः केराले हाम्रो शरीरलाई धेरै उर्जा प्रदान गर्छ । त्यसैले हरेक दिन केरा खाने गरेमा शरीरलाई दिनभर काम गर्ने उर्जा पर्याप्त मात्रामा मिल्छ । यसले गर्दा हामीलाई काम गर्दा थकान महसुस हुँदैन । जिउ जतिखेर पनि फुर्तिलो रहने गर्छ ।
४.सुक्खा फलफूलः भोक मेटाउन र थकाइ मेटेर फुर्तिलो हुन पोषण र ऊर्जायुक्त विभिन्न बदाम र बीउ खानु पनि एउटा राम्रो उपाय हो । कागजी (हाडे) बदाम, बदाम, ओखर, काजु, किसमिस, ब्राजिली बदाम , पेकन्स, पेस्ता, छोगडाका साथै सूर्यमुखी र फर्सीका बीउ खानु बेस हुन्छ । तर, यी सुख्खा फलफूल वा बीउ प्रशोधन नगरिएका र नुन नहालिएका खानु उत्तम हो ।
५. भिटामिनः हामीले पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त भोजन गरिरहेका छैनौं भने शरीरका लागि आवश्यक भिटामिन, खनिज लगायत पोषक तत्वको सप्लिमेन्ट (चक्की वा क्याप्सुल) खानुपर्ने हुन्छ । पोषण नपुग्दा पनि हामी चाँडै थाक्छौं । तर, यस्ता भिटामिनका चक्की वा क्याप्सुल डाक्टरको सल्लाहमा मात्र खानु उपयुक्त हुन्छ ।